Lampung waa gobolka Indonesia. Waxay ku taallaa dhinaca koonfureed ee jasiiradda Sumatra waxayna xuduud u tahay gobollada Bengkulu iyo Koonfurta Sumatra ilaa woqooyiga. Waa guriga asalka ah ee dadka Lampung, oo ku hadlaya luqadooda oo ay haystaan ​​warqad qoran. Caasimaddu waa Bandar Lampung.
Gobolka waxaa ku nool dad tiradoodu ahayd 7,596,115 oo ka soo jeeda tirakoobkii 2010, laga soo bilaabo Janaayo 2014, waxaa ku nool dad tiradoodu ahayd 7,972,246. Saddex rubuc ah dadka hadda ku nool Lampung ayaa ka soo degay Javanese, Madurese, iyo muhaajiriinta Balinese. Muhaajiriintaas ayaa labadoodaba u soo jeediyay dadaalkooda, iyaga oo raadinaya dhul intaa ka badan oo laga heli karo jasiiradaha dadku ku badan yihiin, iyo qayb ka mid ah barnaamijka isgaarsiinta ee dawlada dhexe, kaas oo Lampung uu ka mid ahaa meelaha ugu muhiimsan uguna muhimsan.
Lampung waxaa badanaa loo yaqaanaa xasillooni darradeed. 10kii Maajo 2005, dhulgariirka 6.4 ayaa ku dhuftey gobolka. Duufaantii taariikhiga ah ee taariikhiga ah ee Krakatau, sannadkii 1883, ayaa waxyeelo ba'an ka soo gaadhay aagga.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Lampung&oldid=223788"
Last edited on 12 Nofeembar 2021, at 10:39
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 12 Nofeembar 2021, marka ee eheed 10:39.